Afabela - Cloud Library
Accueil - Audio - Afabela
Ampitaina Mivantana Afabela
Mandefa Episode 1 (33 MB)
Mandefa Episode 2 (34 MB)
Mandefa Episode 3 (45 MB)
Mandefa Episode 4 (86 MB)
Moa ve mba efa nandinika tsara ny mandrakizay ianao? Mety fantatrao tokoa ny toerana handanianao izany, saingy mba fantatrao ve fomba enti-mandany izany mandrakizay izany?
Zava-dehibe amin’ny mpino ny miaina ety an-tany manana fomba fijery mandrakizay, nefa ny mandrakizay dia mbola saro-takarina ihany. Ity tantara renesina avy ao amin’ny boky Sarihin’ny Mandrakizay nosoratan’i John Bevere ity dia toy ny varavarakely ahafahanao mitsirika izay tena ao ambadik’ity fiainana eto an-tany ity.
Eo am-pitrandrahana ilay tany mahafinaritra an’i Afabea ianao izao ka araho ary ny Mpanjaka lehibe Jalyn, i Dagona mpanjakan’ny fahamaizinana, Ratsara Sitra-po, Imahaleo Tena ary ireo mpilalao hafa. Jereo ato ihany koa ny farafitazanana ny Tanàna Haolo. Hiova mihitsy ny fiainanao rehefa asehon’ireo mpilalao ireo ny tena zava-misy marina ao am-ponao.